Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aroosyada Jaceylka Malabka » Dalxiiska Cusub ee Turkiga ayaa diirada saaraya aroosyada
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • jiga • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga
Dalxiiska Aroosku wuxuu bixiyaa faa'iidooyin dhaqaale oo kala duwan wuxuuna ka qaybqaataa dhaqaale ahaan meesha loo socdo iyo qaybaha ay kala leeyihiin qaybta dalxiiska.
Sida dalalku bilaabeen inay isku dayaan inay ka soo kabtaan COVID-19, Turkigu wuxuu dajiyay aragiisa dalxiiska arooska.
Xubin sare oo ka tirsan Ururka Wakaalada Socdaalka ee Turkiga ayaa sheegay in aroosyada ay ka faa'iido badan yihiin noocyada kale ee dalxiiska.
Milkiilayaasha aroosyada caalamiga ah waxay si isa soo taraysa u muujinayaan door biditaanka Turkiga ee Mediterranean-ka iyo magaalooyinka loo dalxiis tago ee Aegean.
Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) iyo Nancy Barkley, Isuduwaha WTN ee Dalxiiska Arooska, waxay taageertaa waaxda dalxiiska ee Turkiga marka ay u weecdo ururada caalamiga ah ee aroosyada si ay u ilaaliyaan ka soo kabashada masiibada COVID-19.
Sannadka 2019, dakhliga dalxiiska ee Turkiga ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay ee US$34.5 bilyan iyada oo in ka badan 45 milyan oo ajaanib ah ay soo booqdeen. Sannadka 2020, si kastaba ha ahaatee, khasaaraha dalka ayaa gaadhay 70% masiibada COVID-19 awgeed. Maanta, Dalxiiska Turkiga waaxdu waxay u soo jeesatay ururada caalamiga ah ee aroosyada sanadkan si ay u sii wadaan ka soo kabashada saameynta xun ee masiibada socota.
"Hay'adaha arooska ayaa ka faa'iido badan noocyada kale ee dalxiiska," Nalan Yesilyurt, oo xubin ka ah guddiga hay'adaha socdaalka ee Turkiga, ayaa u sheegay Xinhua. "Lacagta ku baxday hal usbuuc oo keliya inta lagu jiro ururadan oo kale waxay la mid tahay waxa dalxiisayaasha caadiga ah ay ku qaataan bishii."
Waxay sheegtay in milkiilayaasha aroosyada ajnabiga ah ay si isa soo taraysa u door bidaan Turkiga ee Mediterranean iyo magaalooyinka loo dalxiis tago ee Aegean kuwaas oo bixiya adeegyo "gaar ah oo gaar ah" hoteelada qaybta sare, marinas, iyo makhaayadaha. "Bodrum (oo ku taal gobolka koonfur-galbeed ee Mugla) waxay u iftiimaysay sidii xiddig inta badan nolosheeda cawayska, marinas tayo leh, kuwaas oo soo jiita doonyaha bulshada ee jet-ka iyo makhaayado leh cunto kariyayaal caan ah," Yesilyurt ayaa yidhi.
Duqa magaalada Bodrum Ahmet Aras ayaa sheegay in Bodrum ay baahi weyn u qabto dalal badan oo Yurub iyo Bariga Fog ah, sidoo kalena ay aqoonsi ka hesho dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe. Magaaladu waxay leedahay huteelo waaweyn iyo huteelo waaweyn oo leh in ka badan 1,000 sariirood.
"In kasta oo ay jiraan xaalado masiibo ah iyo xannibaado, Bodrum wuxuu martigeliyay 6 ururo aroos oo Hindiya ka socda sanadkan, kuwaas oo rajo wanaagsan mustaqbalka," ayuu yidhi. Degmadu waxay wada hadalo la yeelanaysay shirkado badan oo caalami ah oo soo qabanqaabiya si loo xaqiijiyo xaflado badan oo aroos ah muddada soo socota.
"In la sameeyo xafladaha aroosyada ajnabiga ah xilliyada ka baxsan marka qiimaha hoteeladu hooseeyo, waxay si weyn uga qaybqaataan qaybta dalxiiska ee Bodrum, dakhli abuur iyo kor u qaadida fursadaha shaqo. Dadka soo booqda Bodrum ee aroosyada ma aha oo kaliya inay waqtigooda ku qaataan hoteeladooda ee waxay aadaan dukaameysi iyo wax ka cunteynta, iyagoo sameynaya hawlo badan,” ayuu raaciyay.
Xafladaha meherka ee Hindida ayaa faa’iido weyn u leh dadka deegaanka maadaama milkiilayaasha aroosyada aysan wax kharash ah u dhaafin si ay martidooda ugu raaxaystaan, sida uu sheegay Duqa magaalada. "Waxay inta badan u ballansadaan hudheelka oo dhan martidooda, kuwaas oo magaalada la yimaada diyaarado kiro ah," ayuu raaciyay.
Caadi ahaan waxay qaataan hal usbuuc waxayna ku raaxaystaan ​​quruxda dabiiciga ah iyo dhaqanka ee gobolka. Kiraynta doonyaha doonyaha iyo safarrada doomaha si ay u arkaan gacan-biyoodyada aan la taaban ayaa noqonaya hawlaha ugu caansan ee booqdayaasha.
Marka lagu daro duullimaadyo caalami ah oo toos ah oo ka imanaya meelo kala duwan oo adduunka ah muddada soo socota ilaa garoonka diyaaradaha ee Bodrum, magaaladu waxay filaysaa inay jiidato "dalxiisayaal qaali ah."
Faafinta degdega ah ee kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ee dalka oo dhan, si kastaba ha ahaatee, waxay welwel ku haysaa wakiilada dalxiiska iyo saraakiisha maxalliga ah. "Baajis kasta oo boos celin ah waxay ka dhigan tahay khasaare weyn oo ku yimid warshadaha oo dhan," Aras ayaa yidhi.